Kubudirira Kwakaita Sei Kuvimbika Zvirongwa Dhiraivha Kunzwisisa uye Maitiro Ehupfumi | Martech Zone
Ongorora: Chinyorwa ichi chakanyorwa na Douglas Karr kubva kubvunzurudzo yeQ & A naSuzi kuburikidza neemail.
Kuvimbika zvirongwa zvinopa mhando nemhando yekuchengetedza vatengi vadzo varipo uye kuvashandura kuva vateveri vanopenga. Nekutsanangurwa, nhengo dzekuvimbika dzinoziva nezve yako mhando, vari kushandisa mari newe, uye vari kukupa iwe yakakosha data mune izvi maitiro.
Kune masangano, zvirongwa zvekuvimbika inzira dzakakodzera dzekufumura nzwisiso inonzwisisika nezvevatengi, dzidza nezve izvo zvinoita kuti vafare, uye pakupedzisira vovaka hwakasimba, hune hukama hukama hune zvakawanda zvakanaka zvenguva refu. Nesimba rekukosha chirevo, zvirongwa zvekuvimbika zvinogona zvakare kutsigira kuedza kwevatengi kutsvaga.
Kune vatengi, kukwidziridzwa uye kwemahara mabhenefiti zvine basa chaizvo, asi zvakanyanya kupfuura izvozvo. Vatengi senge vanonzwa vanokosheswa uye vanoda kuvaka hukama - ndizvo zvatakasungirwa kuita. Zvirongwa zvekuvimbika zvinopa vatengi pfungwa yekuve vega, kunzwa kwekukosheswa, uye zvakare kupa iyo dopamine kurova pavanoona izvo zvinongedzo zvichipinda mukati kana yedu yekutendeka chinzvimbo ichikwira. Muchidimbu, zvirongwa zvekuvimbika zvinobatsirana kusangano nemutengi.
Kuvimbika Zvirongwa Hazvisi Zvese Zvekutengesa
At Brooks Bell, isu tinogadzirisa matambudziko akaomarara ebhizinesi kuburikidza nekuedza uye nzwisiso. Masangano mazhinji anotsanangura chinobudirira chirongwa chekuvimbika seimwe inorova zvinangwa zvavo kana zvasvika pakutora imwe nhamba yenhengo nyowani dzekuvimbika kana kufambisa imwe nhamba yenhengo kubva kune rimwe danho kuenda kune rinotevera.
Nekudaro, mucherechedzo wechirongwa chakanyatsobudirira ndechekuti masangano anoona chirongwa chavo chekuvimbika sechikamu che kasitoma kunzwisisa. Panzvimbo pekuisa tarisiro panhamba, aya masangano anotarisana nekutarisa iyo sei kuseri kwevatengi kubatana nekambani.
Masangano anobva ashandisa ruzivo irworwo kuti vanzwisise zvakadzama vatengi uye vanounza kukosha kusinganzwisisike zvichibva pazvinhu zvakakosha kune vatengi vavo. Dzidzo idzodzo hadzigare mukati mechirongwa chekuvimbika - dzinogovaniswa musangano rese uye zvine simba rekukanganisa akawanda ekubata mabatiro emunhu wese mutengi ane yavo brand.
Kuvimbika Chirongwa Matambudziko Ekudzivirira
Zvirongwa zvekuvimbika zvinowanzoonekwa senzvimbo inodhura mukati mesangano, zvichizoguma zvave kugara zviri padivi - pasina bhajeti, zviwanikwa, kana maturusi. Zvirongwa zvekuvimbika zvine mukana wakawanda kwazvo wekuburitsa pfungwa dzakakosha asi, nekuda kwenzvimbo yavo musangano, izvi zvinogona kufuratirwa kana kurerutswa. Isu tinokurudzira mabrands kuona kuti kuvimbika kuri kushanda zvakanangana nezvikamu zvese zvechiitiko chevatengi senge e-commerce, kuchengetedzwa kwevatengi, kushambadzira, nezvimwewo. Ivo vane ruzivo rwakakosha kugovana uye vanofanirwa kumira zvakanaka kuitira kuti sangano ribatsirwe nezvavanoziva , uye zvinopesana.
Chii chinonzi Behavioral Economics?
Maitiro ehupfumi hupfumi kudzidza kwevanhu kuita sarudzo. Uku kutsva kunonakidza nekuti vatengi havawanzo kuita sarudzo dzinotarisirwa nemabhizinesi. Kune zvakawanda zvidzidzo zvinotsanangudza akasiyana maitiro ehunhu atinogona kudzidza kubva kubatsira kubatsira kuona kuti tiri kuendesa zviitiko zvakanaka kune vanotarisira nevatengi. Izvi zvinonyanya kukosha mubhizinesi redu, sezvo isu takanangana nekufumura ruzivo rwevatengi rwunovaka hukama hwakasimba pakati pevatengi vedu nevatengi vavo.
Kune yakadzama nzwisiso ye Behavioural Economics, inokurudzirwa kuverenga iri Kufungidzira Kusanzwisisika: Mauto Akavanzwa Anoumba Sarudzo Dzedu naDan Ariely.
Kana zvasvika kumapurogiramu ekuvimbika, kune akawanda akadzika midzi maitiro ehunhu mukutamba - kurasikirwa kwenyonganiso, humbowo hwemagariro, gamification, chinangwa chekuona maitiro, iyo yakapihwa kufambira mberi mhedzisiro, uye nezvimwe. Kune zvigadzirwa zvinoongorora nzira yekutaura chirongwa chavo chekuvimbika, zvakakosha kuti uzive kuti vanhu vanoda kukwanawo mukati, kunzwa chikamu chechimwe chinhu uye tinovenga kupotsa pazvinhu.
Kuvimbika zvirongwa zvinorova ese iwo mamaki zvakasikwa, saka kuataura navo zvakajeka kunofanirwa kutendeuka pakarepo. Kana zvasvika pakuita kuti kuvimbika kunakidze kuitira kuti nhengo dzako dzide kuita, mabrand anofanirwa kuziva kuti kufambira mberi kunoonekwa nyore, kuratidza kubudirira, uye kuita kuti kunakidze kune simba kwazvo.
Icho chiitiko chako chedigital chakavakirwa kune chaiyo shopper maitiro? Dhawunirodha whitepaper yedu isu takabatana nayo FullStory kuenderera kudonongodza ina yakakosha maitiro ehupfumi misimboti iwe yaunogona kushandisa kuvaka ine mweya inonzwika, inonzwisisika, uye yakakwira inoshandura dhijitari chiitiko:
Dhawunirodha Maitiro Ehupfumi Mukuita
kuburitsa: Martech Zone iri kusanganisira yayo yehukama yeAmazon yakabatana neBhuku raDan pano.
Tags: maitiro ehupfuminzizi bherokutenga maitiromaitiro evatengikuvimbika kwevatengikuvimbikakuvimbika chirongwa nzwisisozvirongwa zvekuvimbikazvakafanotaurwa zvisina musoro